Yesu Wusɔre No | Esii Ampa?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
ASƐM A ƐDA SO: YESU WUSƆRE NO—NEA ENTI A ƐSƐ SƐ EHIA WO
HERODOTUS yɛ Helani abakɔsɛm kyerɛwfo a ɔtenaa ase mfe 2,500 ni, na ɔkaa Egyptfo a na wɔwɔ ne bere so no ho asɛm wɔ nhoma bi mu sɛ: “Ɛyɛ a wosen funnaka ka ho aduru kama, na wɔde dua sen abaduaba de tom; adaka no tenten yɛ basafa biako anaa abien. Sɛ asikafo tow pon na wodidi wie a, obi soa adaka no fa nnipa no nyinaa anim. Ɔde fa obiara anim ka sɛ, ‘Nom bi na gye w’ani na hwɛ ade yi; sɛ wuwu a, saa na wobɛyɛ.’”
Ɛnyɛ Egyptfo no nko ara na na wɔwɔ nkwa ne owu ho adwene a ɛte saa. Ɛnnɛ ɛfene a aba so ne sɛ, “Didi na nom, na gye w’ani.” Sɛ ɔbra twa owu a, ɛnde adɛn nti na yennye yɛn ani? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛhaw yɛn ho bɔ brapa? Sɛ owu twa biribiara so a, ɛnde ɛho nhia sɛ wudwen ɔkyena ho. Enti ɔsomafo Paulo hu kae ampa. Ɔkaa nnipa a wonnye owusɔre nni no ho asɛm sɛ: “Sɛ awufo nsɔre a, ɛnde ‘momma yennidi na yɛnnom, na ɔkyena na yɛawu.’”—1 Korintofo 15:32.
Nea ɛwom ne sɛ, na Paulo nnye nni sɛ obi wu a, wɔrenkae no bio koraa. Ná ogye di paa sɛ awufo betumi aba nkwa mu bio na wɔatena ase daa. Ade titiriw bi a esii nti na onyaa saa gyidi no. Ohui sɛ ɛyɛ nokwasɛm a obiara ntumi nnye ho kyim; ɛno ne Kristo Yesu wusɔre * no. Saa owusɔre no ne ade titiriw a ɛhyɛɛ tete asuafo no gyidi den.
Ɛnde, adɛn nti na ɛsɛ sɛ Yesu wusɔre no ho hia yɛn saa? Yɛbɛyɛ dɛn koraa ahu sɛ esii ampa? Bere a ɔsomafo Paulo kyerɛwee krataa kɔmaa Kristofo a wɔwɔ Korinto no, ma yɛnhwɛ sɛnea ɔne wɔn susuw saa nsɛm yi ho.
SƐ WƆANNYAN KRISTO NSO Ɛ?
Kristofo a na wɔwɔ tete Korinto no, na owusɔre ho asɛm no ama ebinom adwene atu afra, na na ebinom nso nnye nni koraa sɛ ebetumi asi. Ɔsomafo Paulo krataa a edi kan a ɔkyerɛw kɔmaa Korintofo no mu no, ɔma wohui sɛ, sɛ owusɔre no nyɛ nokware de a, ɛnde na ayɛ asɛm. Ɔkyerɛwee sɛ: “Na sɛ awufo sɔre nni hɔ de a, na ɛkyerɛ sɛ wɔannyan Kristo nso. Na sɛ wɔannyan Kristo nso a, yɛn asɛnka yɛ kwa, na yɛn gyidi nso yɛ kwa. Afei nso wobebu yɛn sɛ yɛadi Onyankopɔn ho adansekurum . . . Mo gyidi so nni mfaso, na moda so wɔ mo bɔne mu. . . . Ɛbɛkyerɛ nso sɛ wɔn a Kristo mu wɔdedae wɔ owu mu no asɛe kwa.”—1 Korintofo 15:13-18.
“Oyii ne ho adi kyerɛɛ anuanom bɛboro ahanum bere koro mu . . . Ɛno akyi no oyii ne ho adi kyerɛɛ Yakobo, ne afei asomafo no nyinaa; na nea etwa to koraa no, oyii ne ho adi kyerɛɛ me.”—1 Korintofo 15:6-8
Asɛm a Paulo de fii ase no, obiara ntumi nnye ho akyinnye. Ɔkae sɛ, sɛ awufo sɔre nni hɔ de a, ɛkyerɛ sɛ Kristo wui no, wɔannyan no amma nkwa mu. Sɛ wɔannyan Kristo a, dɛn na anka ebesi? Ɛnde anka asɛmpaka adwuma no bɛyɛ adwumayɛhunu, na anka ɛbɛyɛ nnaadaa kɛse nso. Efisɛ Kristo wusɔre no yɛ ade kɛse a Kristofo gyidi gyina so, na Bible nkyerɛkyerɛ a ɛfa Onyankopɔn tumidi, ne din, n’Ahenni, ne yɛn nkwagye ho nso, worentumi nka ho asɛm nnyaw Kristo wusɔre. Sɛ Kristo ansɔre a, anka asɛm a Paulo ne asomafo a wɔaka no kae no bɛyɛ nkwaseasɛm.
Anka ɛde nsɛm foforo pii bɛba. Sɛ wɔannyan Kristo amfi awufo mu a, anka Kristofo gyidi bɛyɛ kwa, mfaso biara mma so, na ɛbɛyɛ nnaadaa. Afei nso anka ɛbɛyɛ sɛ nea Paulo ne ebinom adi atoro afa Yesu wusɔre no ho, na ɛbɛyɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn a wose onyan Kristo no, wɔadi atoro afa ɔno nso ho. Bio nso, asɛm a yɛka sɛ “yɛn bɔne nti na Kristo wui” no, anka ɛbɛyɛ atosɛm, efisɛ Agyenkwa no mpo, sɛ wɔantumi annye no amfi owu nsam a, ɛbɛyɛ dɛn na watumi agye afoforo. (1 Korintofo 15:3) Ɛno bɛkyerɛ sɛ Kristofo a wɔawuwu mogya adansefo wu no, wɔasɛe kwa, na wonni anidaso biara sɛ wɔbɛsɔre.
Paulo wiee n’asɛm no sɛ: “Sɛ nkwa yi mu nko na yɛanya Kristo mu anidaso a, ɛnde na yɛn na yɛyɛ mmɔbɔ paa wɔ nnipa nyinaa mu.” (1 Korintofo 15:19) Paulo nso, owusɔre ne ɛho nneɛma a ogye dii nti, ɔhweree nneɛma bi, ohyiaa ɔtaa, ɔfaa ahokyere mu na ɔne owu bɔɔ mpunimpu sɛnea ɛtoo Kristofo binom no. Sɛ owusɔre no nyɛ nokware a, ɛnde anka yɛresom Onyankopɔn kwa!
NEA ENTI A ƐSƐ SƐ WUGYE DI
Ná Paulo nim sɛ ɛnyɛ saa na asɛm no te. Ná ogye di sɛ wɔanyan Yesu afi awufo mu, na ɔkaa adanse a ɛwɔ ho kyerɛɛ Korintofo no sɛ, “yɛn bɔne nti na Kristo wui sɛnea Kyerɛwnsɛm no ka no; na wosiee no, na da a ɛto so abiɛsa no, wonyan no, sɛnea Kyerɛwnsɛm no ka no; na oyii ne ho adi kyerɛɛ Kefa ne afei dumien * no.” Paulo toaa asɛm no so sɛ: “Ɛno akyi no, oyii ne ho adi kyerɛɛ anuanom bɛboro ahanum bere koro mu, na wɔn mu dodow no ara da so te ase, nanso wɔn mu binom adeda wɔ owu mu. Ɛno akyi no oyii ne ho adi kyerɛɛ Yakobo, ne afei asomafo no nyinaa; na nea etwa to koraa no, oyii ne ho adi kyerɛɛ me.”—1 Korintofo 15:3-8.
Paulo de ahotoso na efii n’asɛm no ase sɛ yɛn bɔne nti na Kristo wui, na wosiee no, na wonyanee no. Dɛn na ɛmaa Paulo nyaa ahotoso saa? Ade biako a ɛma onyaa saa ahotoso no ne sɛ nnipa pii de wɔn ani hui. Yesu nyan fii awufo mu no, oyii ne ho adi kyerɛɛ nnipa mmiako mmiako (a Paulo nso ka ho); afei oyii ne ho adi kyerɛɛ nnipa akuwakuw bi, na oyii ne ho adi kyerɛɛ nnipadɔm bi nso a wɔn dodow yɛ 500. Saa nnipadɔm no mu pii wɔ hɔ a bere a wɔtee sɛ Yesu anyan no, wɔannye anni. (Luka 24:1-11) Paulo bere so no, nnipa pii a wɔde wɔn ani hui sɛ wɔanyan Yesu no, na wɔn mu dodow no ara da so te ase a wobetumi adi adanse sɛ ampa wohuu no. (1 Korintofo 15:6) Sɛ nnipa baanu anaa baasa di biribi ho adanse a, ebia yebetumi abɔ agu, nanso nnipa 500 ne akyiri adanse de, obiara ntumi mmɔ ngu.
Kae nso sɛ bere a Paulo reka Yesu wu, ne sie, ne ne wusɔre ho asɛm no, ɔkaa no mprenu sɛ “sɛnea Kyerɛwnsɛm no ka no.” Ɛno a ɔkae no ma yehu sɛ Mesia ho nkɔmhyɛ a ɛwɔ Hebri Kyerɛwnsɛm mu no, ne nyinaa baa mu ma ɛdaa adi sɛ Yesu ne Mesia a wɔhyɛɛ ne ho nkɔm no ampa.
Nnipa bebree adanse a wodii ne nea Bible aka nyinaa akyi no, nnipa pii annye Yesu wusɔre no anni, na ɛnnɛ mpo ebinom wɔ hɔ a wonnye nni. Ebinom mpo kae sɛ Yesu asuafo no wiaa n’amu na wotwaa wɔn ho kae sɛ wɔahu sɛ wanyan. Nanso, Roma asraafo a na wɔrewɛn ɔboda no ano no, na asuafo no nni ahoɔden a wobetumi de adi wɔn so. Ebinom nso kyerɛ sɛ ɛnyɛ nokware sɛ Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ nkurɔfo, na mmom ɛyɛ biribi na wohui wɔn ani so. Sɛ wɔka saa a, ɛnyɛ nokware, efisɛ oyii ne ho adi kyerɛɛ nnipa pii, na ɛnyɛ da koro pɛ na ɔyɛɛ saa. Afei nso wugye di sɛ biribi a wohui wɔn ani so betumi atõtõ apataa akyekyɛ ama nkurɔfo sɛnea Yesu yɛe wɔ Galilea bere a onyanee no? (Yohane 21:9-14) So biribi a wohui wɔn ani so betumi ayɛ ne ho nipa afrɛ nkurɔfo sɛ wɔmfa wɔn nsa mmɛka no?—Luka 24:36-39.
Ebinom nso ka sɛ Yesu wusɔre no yɛ nnaadaa, na asuafo no ara na wɔbɔɔ wɔn tirim kae. Nanso sɛ wɔyɛɛ saa a, anka mfaso bɛn na wobenya? Owusɔre no ho adanse a asuafo no dii no maa nkurɔfo dii wɔn ho fɛw, wohuu amane, na wokunkum wɔn mu bi mpo. Sɛ ɛyɛ atosɛm a, anka ɛbɛyɛ dɛn na wɔde wɔn nkwa ato asiane mu adi ho adanse? Afei nso, Yerusalem a na wɔn atamfo no repɛ ho kwan akyere wɔn abu wɔn atɛn wɔ hɔ no, ɛhɔ ara na wodii adanse no.
Owusɔre no ne ade titiriw a ɛhyɛɛ asuafo no den ma wodii wɔn Wura no ho adanse a ɔtaa a ɛyɛ hu sen biribiara mpo antumi ansiw wɔn kwan. Owusɔre no bɛyɛɛ Kristofo gyidi no nnyinaso kɛse paa. Ɛnyɛ ɔkyerɛkyerɛfo nyansafo bi a wokum no nti na tete Kristofo no de wɔn nkwa too wɔn nsam dii ne ho adanse. Wɔde wɔn nkwa too wɔn nsam dii Yesu wusɔre no ho adanse, efisɛ ɛma ɛdaa adi sɛ Kristo a ɔyɛ Onyankopɔn Ba no wɔ tumi, na ɔyɛ ɔteasefo a ɔboa wɔn na ɔkyerɛ wɔn kwan. Ne wusɔre no kyerɛe sɛ wɔn nso, wobenyan wɔn afi awufo mu. Asɛm no ara ne sɛ, sɛ wɔannyan Yesu a, anka Kristosom nni hɔ. Sɛ wɔannyan Yesu a, anka ebia yɛante ne nka mpo.
Ɛnde, adɛn nti na ɛsɛ sɛ Kristo wusɔre no ho hia yɛn nnɛ?
^ nky. 5 Hela asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “owusɔre” wɔ Bible mu no, nea ɛkyerɛ ne sɛ “wɔbɛsɔre agyina hɔ bio.” Ɛkyerɛ sɛ wɔama obi asan aba nkwa mu bio a ne suban ne ne biribiara nsesae; ɔkae biribiara a na onim.
^ nky. 13 Ɛwom, Yuda Iskariot wui no, ɛkaa asomafo no 11 kosii bere bi, nanso “dumien no” yɛ ɔkwan foforo a wɔfrɛ “asomafo no.” Bere bi a Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ wɔn no, asomafo no mu 10 na na wɔwɔ hɔ, efisɛ na Toma nni hɔ, nanso wɔkaa wɔn ho asɛm sɛ 12 no.—Yohane 20:24.
“Bere bi bɛba a wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ bɛsɔre afi awufo mu.” (Asomafo Nnwuma 24:15) Wɔn a wɔteɛ a wobenyan wɔn no bi ne mmarima ne mmea anokwafo bi te sɛ Noa, Abraham, ne Sara. Wɔn a wɔnteɛ no ne nnipa a wɔannya ho kwan ansua Onyankopɔn ho ade anni ne mmara so no.
Ebinom benya owusɔre abɛyɛ honhom abɔde a owu nni wɔn so tumi, na wɔne Kristo bɛtena ɔsoro adi asase so ahene ne asɔfo. (Adiyisɛm 5:9, 10) Nanso nnipa dodow no ara benya owusɔre abɛtena asase so. Wɔbɛtena asase so paradise agye wɔn ani daa.—Luka 23:39-43.
Bere bɛn na wobenyan awufo?
Sɛ wɔsɛe nipabɔnefo fi asase so a, saa bere no na wobenyan awufo. Bible ma yehu sɛ Yesu mfe apem nniso no mu no, wobenyan awufo bebree aba asase so, na saa bere no wɔbɛma asase adan paradise.—Adiyisɛm 20:6.
Amanne a wɔyɛ no Easter bere no, ɛfa Yesu wusɔre ho anaa?
Sɛ yɛhwɛ aman pii so a, nnipa yɛ amanne pii de kae Yesu wusɔre, nanso saa amanne no ne Yesu wusɔre no nni hwee yɛ, na mmom efi abosonsom mu. Mfomso bi wɔ ho anaa? Yiw. Onyankopɔn Asɛm hyɛ yɛn sɛ yɛntwe yɛn ho mfi atorosom ho na ‘yɛnsom Agya no honhom ne nokware mu.’—Yohane 4:23; 2 Korintofo 6:17.
Asɔre asɔre bi kyerɛkyerɛ sɛ Yesu yɛ Onyankopɔn; sɛ ɛte saa a, ɛnde hena na onyanee Yesu?
Yesu yɛ Onyankopɔn Ba, na ɛnyɛ ɔno ne Onyankopɔn a ne din de Yehowa no. Yehowa na onyanee Yesu fii awufo mu. (Romafo 10:9) Bible ho ɔbenfo bi ka sɛ: “Ntease biara nnim sɛ yebedwen sɛ obi betumi anyan ne ho afi awufo mu; Kristo mpo ntumi nyɛ saa.” *
^ nky. 38 Sɛ wopɛ saa nsɛmmisa yi ho mmuae no bi aka ho a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 7 ne 8. Yehowa Adansefo na wotintimii. Wubetumi nso akɔ www.jw.org.